Khabiirka Kala Duwan: Sida Loo Helo Naqshadda Webka iyo SEO
Search Engine Optimization waxay la kulantay isbeddello xoog lehdhowrkii sano ee la soo dhaafay. Tusaale ahaan, maalmaha hore, farsamooyinka koofiyadaha madow ee macaamiisha sida ereyada muhiimka ah ayaa ka dhigi kara shabakad degdeg ahGoogle. Si kastaba ha ahaatee, horumarinta tiknoolajiyada iyo raadinta jaangooyooyinka, algorithms cusub ayaa lagu cabbiray sida shuruudaha lagu darobogagga internetka ee matoorada raadinta. Maanta, naqshadeeyayaasha shabakada waxay sameeyeen qalab ka fiican oo kaa caawin kara inaad ku biirto qaar ka mid ah dhinacyada SEOdejinta website-yada. Shirkad kasta ee naqshadeynta websaydhku waa inay dhexgalaan nidaamka SEO ee nidaamka ka hor inta aan loo tixgelin sidii mid macquul ah.
Markaad abuurayso boggaga internetka, maskaxda ku haysoee farsamooyinka falanqaynta SEO sida baaritaanka muhiimka ah ee muhiimka ah. Search Engine Optimization waa waxyaalaha ugu dambeeyaa ee ka dhigaya waxyaabaha la soo koobi karobaahidaada suuq-geynta iyo natiijooyinka natiijooyinka baaritaanka dabiiciga ah. Qiimeeyaal badan ayaa laga yaabaa inay isticmaalaan sheekooyin si taxadar leh loogu talagalay laakiin wali way ku guuldareystaan ​​inay helaanqiimeynta saxda ah ee makiinadaha raadinta sida Google. Xaalado kale, ganacsiyadu waxay heleen boggagooda internetka ee Google-ka ku xayiransababtoo ah ma raacin wadiiqo ku haboon suuqgeynta
Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ayaa tilmaamaya qaybaha naqshadeynta website-yada kuwaas oo ku caawinaya abuurista boggaga internetka ee ku haboon.
1. Isticmaalka HTML5
HTML5 waxay u oggolaaneysaa mashiinka webka iyo qoryaha laga soo saaro makiinadaha raadintaraadso iyo muujiyaan waxyaabaha caadiga ah ee bogga. Meelaha la abuuray iyadoo la adeegsanayo HTML5 waa kuwo waxtar leh oo leh khibrad user wanaagsan.Websaydhiyadu waa inay lahaadaan qoondeyn ku filan oo xajmiga ah ee xirmada martigelinta si loo hagaajiyo xawaaraha sirta gaar ahaan inta lagu jiro xaaladahagaadiidka. Websaydhyada HTML5 waxay kordhiyaan taraafikada dadka isticmaala bogga internetka sababta oo ah waxay fahmayaan iyo fududaantooda..
2. Naqshad Sare
Ka jawaab celinta shabakada xeelad farsamo oo ku lug leh abuuristabogagga shabakadda ee ku habboon aalado badan iyo goobo iyo sidoo kale ka shaqeynta daalacado badan ama nidaamyada hawlgalka. Markaad isticmaasho anaqshad wax ku ool ah, uma baahnid inaad bedesho URL SEO. Natiijo ahaan, waxaad ka faa'iideysan doontaa taageerada SEO oo dhammaystiran oo haddii kale lahaalumay iyada oo dib loo qaybiyo dib udhaca miiska iyo moobilka mobile ee website-ka.
3. Caqliga garashada
Bogagga soo degaya ee loogu talagalay kelmado gaar ah ee SEO waa inay ku jiraanMawduuca ku haboon. Trick Tricks waa muhiim sababtoo ah dadka intooda badani ka boodi goobta gaar ahaan haddii mawduuc aan ka soo horjeeda lahayn, ma muuqata faa'iidoama waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah qaybo badan oo ka dhigaya bogga internetka. Xidhiidhada muhiimka ah ee shabakadda waa in ay ku yaalaan goob muuqaal ahtaas oo u sahlaysa isticmaalayaasha in ay xakameyaan dhaqdhaqaaqooda bogga. Xusuusnow, isticmaaluhu waa inuu ahaadaa himilada ugu dambeysa ee guulo kastanaqshadda bogga
4. Arjiga Keydinta
Si SEO-yada u noqdo mid taabogal ah, mid waa inuu isticmaalaa wax yar oo taas oo ahwaa inuu noqdaa mid wargelin badan. Qaar ka mid ah khubarada SEO ayaa aaminsan in ay ku jiraan content dheeraad ah oo ku yaal bogag badan si ay u noqdaan sadare si aad u hesho mugga raadinta more.Si kastaba ha noqotee, qof caadi ah ayaa loo badinayaa in loo wareejiyo doorashooyin ka yar doorashooyin badan. Waa muhiim inaad ku darto dhammaan waxyaabaha ku jira qaybahakuwaas oo aan ahayn mid aad u badan ama haddii kale dhagaystayaashu si fudud u caajisaan. Tusaale ahaan, qalabka Google sida Hummingbird ayaa keenay isbeddello badantaas oo ka dhigi karta qaybo badan oo ka mid ah hal bog bogaadin u ah dedaalkaaga SEO.
Qaar ka mid ah qaababka naqshadeynta bogga ayaa muhiim u ah xeeladaha dhan ee SEOshaqada. Mid ka mid ah horumarinta goob fiican, macaamiilku waa inuu ku dadaalaa inuu ku qanco. Ka dib calaamadaha kor ku xusan waxay dhalin doontaa isticmaale user interactivewebsite-ka iyo sidoo kale mid ka mid ah aragtida mashiinka raadinta wanaagsan oo faa'iido u leh isticmaalaha iyo shirkadda lafteeda Source .